"ပတ်တမွား မှနျရငျ နှံမနဈပါဘူး" !!! အောကျတိုဘာလ အကောငျးဆုံးနညျးပွဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖရနျ့လမျးပတျ
ခယျြလျဆီးအသငျး၏ နညျးပွဖွဈသူ ဖရနျ့လမျးပတျဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမှ ပေးအပျသညျ့ အောကျတျုဘာလအတှကျ တဈလတာ အကောငျးဆုံး နညျးပွဆုကို ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ။ နညျးပွဖရနျ့လမျးပတျဟာ နညျးပွဘဝသို့ ဝငျရောကျခွငျးဟာ ၁နှဈကြျောသာ ရှိနပေမေယျ့ ပွီးခဲ့သောနှဈက ခနျြပီယံရှဈတှငျ ဒါဘီကောငျတီအသငျးကို အကောငျးဆုံး မွှငျ့တငျပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးမှ ခနျ့အပျခဲ့ပါတယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ယခုနှဈဘောလုံးရာသီတှငျ ‌အခကျအခဲမြိုးစုံ ရှိခဲ့ပွီး ကစားသမားဝယျယူခှငျ့ ပိတျပငျခံရခွငျးကွောငျ့ အသငျးမှ ထှကျခှာသှားသော ဘယျဂြီယံကွယျပှငျ့ အီဒငျဟာဇကျ၏ နရောကို အစားထိုးနိုငျခွငျး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နညျးပွလမျးပတျဟာ လူငယျအကယျဒမီမှ ကစားသမားမြားကို နရောပေးကာ အသုံးပွုကာ အသငျးကို ဦးဆောငျကာ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့(၄)မှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
လမျးပတျဦးဆောငျသညျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ပွီးခဲ့သညျ့လအတှငျး ဆောကျသမျတနျ အသငျးအား ၄-၁၊ နယူးကာဆယျအား ၀-၁၊ ဘနျလအေသငျးအား ၄-၂ ဖွငျ့ အနိုငျရရှိခဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျသားနညျးပွ ဖရနျ့လမျးပတျဟာ အဆိုပါဆုအတှကျ လီဗာပူးလျနညျးပွ ယာဂငျြကလော့၊ ဘရိုကျတနျနညျးပွ ဂရဟေမျပိုတာ၊ လကျစတာ နညျးပွ ဘရိုငျယနျရျောဂြာ၊ အကျစတှနျဗီလာနညျးပွ ဒိနျးစမဈ တို့ကို ကြျောဖွတျကာ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါဆုနဲ့ ပကျသကျပွီး ” ဒီလိုမြိုး တဈဦးခငျြး ဆုတံဆိပျကို ရရှိတဲ့အခြိနျက ကိုယျရဲ့ကွိုးစားမှုကို အသိအမှတျ ပွုလိုကျသလိုပါပဲ။ အသငျးမှာရှိတဲ့ ဘယျသူမဆို ရာသီ‌ကွိုခွစေမျးပှဲတှကေစလို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ကွိုးစားခဲ့ကွတယျ။ ဒီဆုဟာ တဈဦးခငျြးကွိုးစားခငျြး ကွိုးစားလို့ မဟုတျပဒ အသငျးလိုကျ စညျးစညျးလုံးလုံး ဆောငျရှကျခဲ့လို့ ဖွဈပါတယျ” ဆုလကျခံခြိနျမှာ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ဒီဆုကို ရရှိလို့ အားလုံးအတှကျ ဝမျးသာပါတယျ။ အောကျတိုဘာလအတှငျး ကစားခဲ့ပွီးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျတှထေဲမှ ဘနျလအေသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျက စတျဝငျစားစရာ ကောငျးခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျဟာ ဘယျလမျးကွောငျးမှာ ရှိနပွေီး ဘယျလောကျထိ ကောငျးမှနျနကွေောငျး ပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီပှဲကနတေဈဆငျ့ ဒီဆုအတှကျ တကျလှမျးနိုငျခဲ့ပါတယျ” ဟု လမျးပတျမှ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
“ပတ္တမြား မှန်ရင် နွံမနစ်ပါဘူး” !!! အောက်တိုဘာလ အကောင်းဆုံးနည်းပြဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖရန့်လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီးအသင်း၏ နည်းပြဖြစ်သူ ဖရန့်လမ်းပတ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ပေးအပ်သည့် အောက်တိုဘာလအတွက် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြဖရန့်လမ်းပတ်ဟာ နည်းပြဘဝသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဟာ ၁နှစ်ကျော်သာ ရှိနေပေမယ့် ပြီးခဲ့သောနှစ်က ချန်ပီယံရှစ်တွင် ဒါဘီကောင်တီအသင်းကို အကောင်းဆုံး မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီတွင် ‌အခက်အခဲမျိုးစုံ ရှိခဲ့ပြီး ကစားသမားဝယ်ယူခွင့် ပိတ်ပင်ခံရခြင်းကြောင့် အသင်းမှ ထွက်ခွာသွားသော ဘယ်ဂျီယံကြယ်ပွင့် အီဒင်ဟာဇက်၏ နေရာကို အစားထိုးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းပြလမ်းပတ်ဟာ လူငယ်အကယ်ဒမီမှ ကစားသမားများကို နေရာပေးကာ အသုံးပြုကာ အသင်းကို ဦးဆောင်ကာ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့်(၄)မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းပတ်ဟာ ရာသီအစမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသင်းကို ဦးဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် ဆွဲတင်ပေးခဲ့တာကြောင့် ယခုလိုဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးခဲ့တာပါ။
လမ်းပတ်ဦးဆောင်သည့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း ဆောက်သမ်တန် အသင်းအား ၄-၁၊ နယူးကာဆယ်အား ဝ-၁၊ ဘန်လေအသင်းအား ၄-၂ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်သားနည်းပြ ဖရန့်လမ်းပတ်ဟာ အဆိုပါဆုအတွက် လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂျင်ကလော့၊ ဘရိုက်တန်နည်းပြ ဂရေဟမ်ပိုတာ၊ လက်စတာ နည်းပြ ဘရိုင်ယန်ရော်ဂျာ၊ အက်စတွန်ဗီလာနည်းပြ ဒိန်းစမစ် တို့ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဆုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ” ဒီလိုမျိုး တစ်ဦးချင်း ဆုတံဆိပ်ကို ရရှိတဲ့အချိန်က ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားမှုကို အသိအမှတ် ပြုလိုက်သလိုပါပဲ။ အသင်းမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို ရာသီ‌ကြိုခြေစမ်းပွဲတွေကစလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဒီဆုဟာ တစ်ဦးချင်းကြိုးစားချင်း ကြိုးစားလို့ မဟုတ်ပဒ အသင်းလိုက် စည်းစည်းလုံးလုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဆုလက်ခံချိန်မှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုကို ရရှိလို့ အားလုံးအတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကစားခဲ့ပြီးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေထဲမှ ဘန်လေအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်က စတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေပြီး ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းမွန်နေကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲကနေတစ်ဆင့် ဒီဆုအတွက် တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု လမ်းပတ်မှ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။